Ihe omuma nke Olympus nke 2018 zuru ezu
Isi > Ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka Nyocha > Olympus Trade Trading Platform 2018
11.01.2018 · 0 · Ntinye niile maka January 2018
Anyị na-echetara gị nchịkọta nchịkọta nke ahịa ahia Olimp nke onye ahịa ya na-enweta mmelite site na nyocha ikpeazụ anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji chee na ọ dị mkpa ịhapụ nsụgharị ọhụrụ nke mbipụta ahụ n'elu nhazi ahịa nke onye na-ere ahia a. Ọ bụghị ọrụ kachasị na nke a na-akpọkwa ewu ewu nke ụlọ ọrụ a n'etiti ndị ahịa.
Osisi ahia ọnụọgụ nke Olympus.
Uru nke ahia na ahia Olympus.
Ọkụ ahịa azụmahịa Olympus 2018.
Ọnọdụ ahia nke usoro ntaneti Olim Trade.
E nwere ohere maka ahia.
Ịkwụ ụgwọ na nkwụsị nke ego site na trading trading Olymptrade.
E nwere ụdị akụkọ.
Ọrụ nke nkwado teknụzụ nke ahia ahia Olimp.
Osisi ahia ọnụọgụ nke Olympus
Ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ Ogwu Ogwu dị kemgbe afọ 2014. Ọ bụ Smartex International Ltd., nke e debanyere aha na Seychelles. N'agbanyeghi ebe edere aha nke onye na-ere ahia site n'aka Russia, ọ bụ na mba anyị ka o jisiri ike ijide ọnọdụ nke ya na obere oge. Ekele maka ihe Ego Olympus nwere ike ịchọta ya n'etiti ndị ahịa Russia? Enwere ọtụtụ ihe.
Uru nke ahia na Osimiri Olympus
Ịdabere na nchekwa
Ogwu Ogwu bụ onye so n'òtù "A" nke International Financial Commission. Ọ bụ nzukọ nwere onwe ya nke na-enye ma na-eme ka nchebe nke ikike nke ndị ahịa na-enye na-eme ka ha nwee nchebe. Karịsịa, ọ bụrụ na ndị uweojii na-eme ihe na-akwadoghị, Commission reimbigara ahịa ahụ ruo $ 20 000 site na ego nke ego ego nke onwe ya.
N'ihi ya, ndị ahịa Ogwu Ogwu Ha enweghi ike ichegbu onwe ha maka nchekwa nke onwe ha. Ụlọ ọrụ ego ahụ na-eme ka nchebe ha nwere nchebe.
Ego kacha nta iji malite ahia
Ọnụ ego kachasị elu n'elu ikpo okwu bụ nanị 350 ₽ / $ 10 / € 10. Ego a nke nkwụnye ego dị ka onye ọ bụla, ọ bụla ọganihu. N'ihi uru a, onye ọ bụla, na-enweghị otu, nwere ike ịnwale aka ya na nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Enwere ike ịnweta ohere na ọrụ
Ọrụ a na-arụ ọrụ maka ndị ahịa niile. karịsịa. N'ihi ọrụ a, ndị ahịa anaghị atụ anya na ha ga-atụfu ego ha, kama ha na-amalite ịzụ ahịa n'eziokwu, na-eji usoro atụmatụ ahia. Ọzọkwa, onye ọ bụla ahịa nwere ike ịzụ oge ọ bụla na akaụntụ na-enweghị ihe ize ndụ site na ya aka.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke uru nke onye na-ere ahia Ogwu Ogwu. Ntak emi ọtụtụ puku ndị ahịa na-ahọrọ ya? Azịza ya dị na isiokwu nyocha anyị.
Njikwa ngwa Ogwu Ogwu; - mmepe pụrụ iche nke onye na-ere ahia. N'ime mmepụta ihe mmemme ya, ndị ọkachamara ego na ndị ahịa weere òkè. Ụlọ ọrụ ahụ nọgidere na-emeziwanye ya kwa ụbọchị. Ya mere, ihe nwere ike inwe na ikpo okwu a "ga-akwusi", na ndi mmadu a ga-agbaji maka ihe ndi ozo, a na-ebelata ya na efu.
Enwere ike ịhazi usoro ikpo okwu "maka onwe gị"
Ndị ahịa nwere ike ịgbanwe asụsụ: dịnụ
Họrọ otu esi egosiputa eserese;
Dezie isiokwu agba:
ma ọ bụ ọchịchịrị.
Nkà na ụzụ nke trading trading Olympus Trade
Ndị ahịa nwere ike:
gbanwee oge nke eserese na nkeji site na 25 sekọnd ka 1 nke ọnwa na mpaghara ahụ na site na 15 sekọnd ka oge 60 na Candles na Haiken Ashi;
Tinye ndị na-egosi na oscillators na eserese maka nyochaa nke ọma.
Ọzọkwa Ego Olympus Nlekọta ahịa 2018 na-enye onye ahịa ọ bụla ozugbo ọ debanyere ya aka ịnweta akaụntụ ngosi n'efu. Ihe ndekọ ọ bụla nwere 10 000 mebere nkeji.
Otu akaụntụ nchịkọta bara uru karịsịa maka ndị na-amalite: ndị ahịa na-amalite ọrụ ga-enwe ike ime ya na ya tupu ha amalite ahịa na akaụntụ dị adị. Ọ dịkwa mkpa ka enwere ike ịnye akaụntụ ngosi ahụ n'efu na nkeji nke 10 000 nke mbụ, ma ọ bụrụ na ihe na-erughị 5000 fọdụrụ na ya.
Inweta akwukwo ihe omumu abughi oge. Ndị ahịa nwere ike ịlaghachi na ya n'oge ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, itinye ụkpụrụ ọhụrụ a mụtara n'ọrụ, na-enweghị ihe ize ndụ nke ego ha.
Ọnọdụ ahia nke usoro ntaneti Olim Trade
Onye na-ere ahia na-enye ọnọdụ ahịa ndị a:
Nkwụnye ego kachasị elu bụ 350 ₽ / $ 10 / € 10 (dabere na ego akaụntụ).
Ọnụ ego kachasị nke ntinye maka inweta ọnọdụ VIP bụ 100 000 ₽ / $ 2000 / € 2000.
Ọnụahịa azụmahịa kachasị ọnụ bụ 30 ₽ / $ 1 / € 1.
Ọnụ ego kachasị elu bụ 150 000 AUD / $ 2000 / € 2000 maka ndị na-edekọ ihe ndekọ na 400 000 ₽ / $ 5000 / € 5000 maka ndị ahịa VIP.
Nwepụta - 80% nke ego etinyegoro maka azụmahịa maka ndị na-edekọ akụkọ akụkọ na 90% maka ndị ahịa VIP.
Ọnụ ego kachasị nta bụ 350 ₽ / $ 10 / € 10.
Ego nkwụsị kachasị na-enweghị njedebe (enweghị oke - i nwere ike iwepu ego ọ bụla site na akaụntụ ahụ).
oge nkwụsị ahụ bụ nkezi nke ụbọchị 1 maka ihe ndekọ nke akụkọ (kacha - 5 ụbọchị ọrụ) na ọtụtụ awa maka ndị ahịa VIP (kachasị - ụbọchị 1).
Uru ọzọ: enweghị ọrụ ọ bụla maka itinye aka / mmepụta nke ego.
Ya mere, okwu nke ahia na ikpo ahia Ogwu Ogwu - ezigbo uru ma dị jụụ. Ego nke kacha nta, uru zuru oke, enweghị ọrụ na ndọrọ ego na obere oge.
E nwere ohere maka ahia
Nye ndị ahịa na-ere ahịa n'elu ikpo okwu nke Ụlọ Osimiri Olymp, ihe ndị na-esonụ dị:
Ụgwọ ego abụọ.
Ntinye na nkwụsị nke ego site na trading trading Olymptrade
Ị nwere ike ibudata akaụntụ ahụ n'ụzọ ọ bụla n'ime ụzọ ndị a:
site n'igwe ụgbọ mmiri Qiwi, Webmoney, Neteller, Skrill, Yandex.Money na Bitcoin;
site na kaadị bank Visa ma ọ bụ Mastercard.
Ị nwere ike ịdọrọ ego site na otu usoro ịkwụ ụgwọ.
Ihe dị mkpa: a na-emepụ naanị ya na kpọmkwem otu obere akpa / kọntaktị eletrik ahụ, nke e dejupụtara akaụntụ ahụ. Iwu a na-enye onye na-ere ahịa ohere ka ọ kwadoro nchedo ịkwụ ụgwọ ma chebe ego nke ndị ahịa site na omume nke ndị na-asọ oyi.
Oge kachasị ezumike bụ oge 5 ahịa, ma onye na-ere ahịa na-agbalị ịhazi iwu ndị ahịa ngwa ngwa o kwere mee. Ya mere, ndị na-ejide ihe ndekọ ọkọlọtọ na-enweta ego na nkezi n'oge 1 ụbọchị, na ndị ahịa VIP - awa ole na ole mgbe o nyesịrị ya.
E nwere ụdị akaụntụ
N'elu ikpo okwu ndi ahia ahia ahia di 3 ihe omuma:
Tụkwasị na nke ahụ, ndị ahịa VIP na-enweta ọtụtụ ihe ùgwù ndị ọzọ: enyemaka nke onye ndụmọdụ VIP, ohere maka usoro nchikota site na ịchọta ndị nyocha nke ego nke onye na-ere ahịa na ngwá ọrụ pụrụ iche - azụmahịa na-enweghị ihe ize ndụ. Ha na-ahapụ onye ahịa ahụ ịlaghachi na akaụntụ ahụ niile ego etinyekwara ya na azụmahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie na amụma.
Ngwa ndị ọzọ nke ahia ahia ahia
Na mgbakwunye na ọkọlọtọ, ndị ahịa-ahịa Ogwu Ogwu ọtụtụ ngwá ọrụ ego bara uru dị:
Ego ndi ozo: Bitcoin na mmepe aka nke ogwu Ochichi - Cryptoindex. Ihe ndị a na-ere 24 / 7 ahịa ma na-egosi oke mkpụrụ ọbụna na ngwụsị izu.
Deal Cancel tool. Ọ bụrụ na amụma ahụ wee bụrụ ihe ọjọọ, ọnụ ahịa nke ihe onwunwe ahụ na-aga na nke ọzọ site n'akụkụ ahụ a na-ahụ anya, onye ahịa ahụ nwere ike ịkagbu ihe omume emeghe. N'otu oge ahụ, akaụntụ ya ga-alaghachi na 60% nke ego ego.
A na - ehichapụ ya n'oge 5 / 6 mbụ ahụ site na ụbọchị nkwụsị nke nhọrọ ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị mepee ihe maka 60 nkeji, mgbe ahụ na nkeji 50 mbụ ị nwere ike ịkagbu ya wee si otú ahụ laghachi ụfọdụ n'ime ego etinye ego na akaụntụ ahụ.
Ngwaọrụ azụmahịa ejiri. Usoro azụmahịa echere bụ ngwa maka ịzụta ma ọ bụ ịzụta nhọrọ na oge a kapịrị ọnụ ma ọ bụ mgbe nhọrọ ahọpụtara ruru ụfọdụ uru.
Ihe atụ. Ị maara na akụkọ ahụ dị mkpa ga-abịa n'abalị a, nke ego mmanụ Brent ga-amalite na-eto eto, ma ga-achọ ịmepe ihe kwesịrị ekwesị, ma ị gaghị enwe ike n'ihi enweghị ike ịnweta Ịntanetị. Usoro azụmahịa echere ga-enyere aka dozie nsogbu a: ị mepụtara ngwa kwekọrọ ekwekọ, ma mgbe ị ruru oge a kapịrị ọnụ, azụmahịa ahụ na-emepe.
Ndị ahịa ndị debanyere aha na ikpo okwu nke Olimpark Ochichi, nweta ohere ọzọ na-adọrọ mmasị - ịmụta otú e si azụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, na oke n'efu. Onye na-ere ahịa na-enye ihe niile dị mkpa maka nke a:
Ebumnuche ndị mepụtara site na ndị na-eme nnyocha.
Akụrụngwa gụnyere ma ihe nkenke, nke ga-aba uru karịsịa maka ndị na-amalite, na ihe ọmụma miri emi maka ndị ahịa nwere ahụmahụ.
Ọrụ nke nkwado teknụzụ nke ahia ahia Olimp
Ọrụ enyemaka nke Olymp ahịa na-agba ọsọ 24 / 7 - kwa ụbọchị, 24 awa n'ụbọchị, n'ihi ya ị nwere ike inweta enyemaka site n'aka ndị ọkachamara n'oge ọ bụla:
Egwuregwu Olimpik ngwa ngwa dị maka nbudata na Google Play site na njikọ a.
Ya mere, Ogwu Ogwu - a pụrụ ịdabere na ya, na-ekwenye na nchekwa nke azụmahịa niile, onye na-ere ahịa nke ọma na-enye ọtụtụ ngwaọrụ na ọzụzụ n'efu, nke na-eme ka ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ya dị ka ihe dị mma ma dị irè dị ka o kwere mee. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji họrọ ọtụtụ ndị ahịa ọ bụghị naanị na Russia, ma n'ụwa nile. Ugbu a, a na-edebanye aha ndị 6.500.000 n'elu ikpo okwu, nọmba a ka na-eto kwa ụbọchị.
Deba aha ma mepee akaụntụ na Ogwu Ogwu
Otu esi enweta ego ego bitcoin site na ncha na ihe ị chọrọ maka nke a
Binomie na-enyocha ezigbo 2018
Ihe ndị ọzọ si na ụdị "Nyocha nke ọnụọgụ abụọ nhọrọ brokers"
17.11.2014 · 104
Nyochaa ọnụọgụ abụọ na nyocha
Nyocha Binarium na nyochaa3.7 (73.33%) 3 votes ...
Binarium: akụkọ na mmelite nke ikpo okwu ahia
Binarium: ozi na melite ...
24.09.2014 · 24
Nhọrọ Brokers Rally Akụkụ
Broker Option Rally2.3 (45%) 4 votes ...
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke a pụrụ ịdabere na ya
Ego ọnụọgụ ere
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ Alpari nhọrọ 5 (100%) votes 2 ...
Ọnụọgụ Nhọrọ Ọnụọgụ abụọ
Achọrọ 1000 dollar kwa akaụntụ? Anyị na-agwa otu esi enweta!